Disabled Man Wants To Die But No One Will Help Him
One To Touch You
Goose At Taylor’s University Lakeside Campus
Mandat BN Sudah Hampiri Garis Penamat
Stay Hungry! Stay Foolish! You’ve got to find what you love!
Telling it as it is: Chinese is marginalised. If not, why Chinatown not spared?
UMNO Pesongkan Fakta Sejarah, Padam Jasa Perjuangan Para Agamawan
IT Support Joke: http://notalwaysright.com/feeder-mice-not-included/13033
Salmon Life Cycle Song
Ingatan Untuk Menteri UMNO BN - Kerajaan Tumbang Jika Pinggirkan Suara Ilmuan
Unicef report 2007: British children have the most miserable upbringing
Vic Gundotra shares on Google+: Steve Jobs 'one of the greatest leaders'!
Kemaafan, Dendam Yang Terindah - Ayah Ayu Maafkan Pembunuh Anaknya
Recoup MRT cost FIRST, land acquisition NOW! Chinatown traders LAST!
Chinatown traders slam SPAD! Where is Soi Lek?!
Siapa Mat Indera Yang Namanya Jadi Sebutan Sekarang Ini?
Posted: 01 Sep 2011 10:30 AM PDT
"Ini merupakan satu kenyataan yang sungguh tidak bertanggungjawab dan boleh menyebabkan keluarga yang terlibat terutama sekali keluarga pejuang-pejuang kita yang telah pergi berasa sedih, lebih-lebih lagi kita berada dalam suasana kemerdekaan serentak dengan sambutan Hari Raya.
"Kenyataan begitu sewajarnya tidak dikeluarkan oleh mana-mana pihak atau mana-mana parti politik sekalipun," katanya di Papar. -TMI
"Pada saya, sebenarnya perlu kepada penziarahan semula sejarah kemerdekaan kita kerana sejarah yang ada pada hari ini hanya ditulis dari satu sisi pandang iaitu dari pihak Umno BN yang diberi kuasa oleh penjajah British," kata beliau yang juga Ahli Parlimen Kuala Selangor.
"Kita menerima nasionalis berunding meja bulat dengan British kemudiannya diberi kuasa, namun kita juga perlu mengiktiraf dan merakamkan perjuangan agamawan nasionalis dan golongan kiri yang turut berjuang memerdekakan negara dari British," katanya dipetik Harakahdaily hari ini.
"Umno buat apa, berunding meja bulat sahaja, ini Tok Janggut, Abdul Rahman, Tok Ku Paloh, Datuk Bahaman berjuang angkat senjata lawan British bukan ikut telunjuk British," tambah beliau.
"Golongan konservatif akan mengekalkan penguasaan British. Penentang keras dan mahu negara ini merdeka mengikut acuan sebenar dicap kiri atau komunis," jelasnya lagi.
"Cuma Umno tidak sedar mereka adalah 'radio buruk' hari ini di mata rakyat yang sudah merdeka," katanya. -TMI
Posted: 01 Sep 2011 09:00 AM PDT
BBC ONLINE: 18 August 2011 Last updated at 16:09 GMT Man's fight for 'equality' over assisted suicide guidelines By Jon Manel BBC News Martin wants assurances that his doctors and lawyers won't be prosecuted for helping him A man who is almost completely paralysed is taking legal action inabid to end his
Posted: 01 Sep 2011 09:49 AM PDT
Posted: 01 Sep 2011 07:46 AM PDT
It has beenavery hectic week starting with the homecoming of my son who has cleared his final semester exams and then the wedding ofafriend where I was the MC for the evening and my boys played the violins..With all the running around, I have been ill since last night - and that is why I have not been able to blog or to update the site. My apologies. Here'sapost which I posted before - am posting it because SKT sent it to me yesterday and it is so beautiful it deservesarepost. Hope you enjoy this story. Take care and havealovely evening!
I was born inasecluded village onamountain. Day by day, my parents ploughed the yellow dry soil with their backs towards the sky.
After that, he sat down on our stone bed and scolded my brother, 'You have learned to steal from your own house now. What other embarrassing things will you are possibly doing in the future? You should be beaten to death, you shameless thief!'
I stuck out my hand as gently as I can to my brother's swollen face, and told him, 'A boy has to continue his study; if not; he will not be able to overcome this poverty we are experiencing.' I, on the other hand, had decided not to further my study at the university.
I felt so touched, and tears filled my eyes. I swept away dirt and dust from my brother's body. And told him withalump in my throat, 'I don't care what people would say! You are my brother no matter what your appearance is?'
'It was your brother who went home early to clean the house. Didn't you see the wound on his hand? He hurt his hand while he was replacing the window.'
I applied some ointment on his wound and putabandage on it, 'Does it hurt?' I asked him..
Withaserious expression on his face, he defended his decision, 'Think of brother-in-law. He just became the director, and I being uneducated, and would becomeamanager, what kind of rumours would fly around?'
My husband's eyes filled up with tears, and then I said, 'But you lack in education only because of me!'
'When I was in primary school, the school was inadifferent village. Every day, my sister and I would walk for2hours to school and back home. One day, I lost the other pair of my gloves. My sister gave me one of hers.
God is just so good and He's good all the time. Remember, prayer does change things!
Posted: 01 Sep 2011 06:52 AM PDT
Taylor's University Lakeside Campus is one of the nicest university campus in Malaysia, the school fees also very "nice (expensive)", yet the campus is really good. There'sanot-very-big lake in the middle of the campus.
Onafine and cloudy, relaxing and lovely afternoon at Taylor's University Lakeside Campus, students strolled around the lakeside and I saw animal by the lake.
The are the goose! I am not sure they are goose or duck. I thought it was duck, but mom told me it's goose.
It's goose because they are fatter and the neck is longer. What do you think?
These are the playful goose that always get onto the steps to find food. Students and passersby do feed them occasionally.
Luckily they didn't get further onto the land, the found it bored and went back foraswim in the water. =D
Posted: 01 Sep 2011 07:47 AM PDT
Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang mengingatkan Datuk Seri Najib Razak mandat kerajaan pusat Barisan Nasional (BN) menghampiri garisan penamat dan mahu perdana menteri menunaikan pembaharuan dijanjikan secepat mungkin atau menghadapi tamparan pengundi pada pilihan raya umum ke-13.
BN mempunyai 19 bulan lagi sebelum mandatnya berakhir awal 2013.
Populariti Najib telah menjunam enam mata dalam kajian terbaru kendalian Merdeka Center baru-baru ini.
"Rakyat Malaysia mengibarkan bendera kebangsaan semalam tetapi mempunyai satu persoalan yang sama - ke mana anda pergi, Malaysia?" kata penasihat DAP ini dalam satu kenyataan dikeluarkan hari ini.
Lim berkata, pemimpin-pemimpin komponen perikatan dalam perutusan Hari Kemerdekaan Ke-54 semalam menyeru rakyat Malaysia yang berlainan latar belakang agama dan kaum agar bersatu, bersikap sederhana dan bertolak ansur antara satu sama tetapi ia kelihatan diterima dengan hambar.
Ini kerana, menurut Lim, landskap nasional yang "pecah belah dan berbalah", di samping ketidakupayaan Najib untuk memperlihatkan kepimpinan yang berkesan.
Ahli Parlimen Ipoh Timur ini menekankan, usaha-usaha yang tidak bertanggungjawab dan semberono cuba memecah belah negara mengikut garisan kaum dan agama.
Beliau memberikan contoh satu laporan menerusi saluran TV1 pada Ahad lalu - didakwa mengaitkan satu laman sosial Facebook menggalakkan murtad di kalangan Muslim dengan pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat.
Saluran milik kerajaan itu menyiarkan bahan berkaitan kumpulan Facebook "Murtads in Malaysia and Singapore" menerusi segmen berita perdana 8 malam mengaitkan pemimpin-pemimpin seperti Tan Kok Wai, Charles Santiago, Dr Boo Cheng Hau dan Ean Yong Hian Wah.
Malah, laporan itu mendakwa Presiden Parti Sosialis Malaysia Dr Nasir Hashim sebagai seorang penyokong kumpulan tersebut.
"Pembohongan menjadi hidangan utama disajikan oleh media arus perdana," kata beliau dengan merujuk kepada liputan bahawa DAP mahu mewujudkan sebuah negara Kristian dan mahukan perdana menteri kalangan penganut Kristian atau kecaman terbaru bahawa Timbalan Presiden PAS Mohamad Sabu mengagungkan komunis dan tidak menganggap Datuk Onn Jaafar dan Bapa Malaysia Tunku Abdul Rahman sebagai pejuang kemerdekaan sebenar.
Katanya, usaha-usaha sedemikian tidak membantu dalam menyatupadukan rakyat Malaysia, tetapi mewujudkan persekitaran sebaliknya.
Lim menegaskan bahawa jika Najib serius dan jujur sebagai perdana menteri bagi semua rakyat, maka beliau seharusnya menyediakan kepimpinan, bukan slogan-slogan kosong.
"Perhimpunan Bersih9Julai yang berjaya adalah bukti, jika Najib dan mereka dalam kuasa enggan bertindak, maka rakyat Malaysia sama ada orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban atau Orang Asli, sama ada yang beragama Islam, Buddha, Kristian, Hindu, pengikut Taoisme, Konfucius atau Sikh bersedia untuk bersatu bertindak menyelamatkan Malaysia," kata Lim lagi.
Bersih 2.0 menuntut pembaharuan pilihan raya dengan mengemukakan lapan tuntutan sebelum pilihan raya umum ke-13.
Awal bulan lalu, Najib mengumumkan pembentukan sebuah jawatankuasa pilihan khas untuk mengkaji pembaharuan pilihan raya.
Posted: 01 Sep 2011 06:28 AM PDT
Source:'You've got to find what you love,' Jobs says at Stanford University blog. This isaprepared text of the Commencement address delivered by Steve Jobs, CEO of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, on June 12, 2005.
am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I've ever gotten toacollege graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories.
"Stay Hungry. Stay Foolish." – Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address (rinaldoshealthblog.wordpress.com)
I'm Glad I Dropped Out of College (lewrockwell.com)
iQuit: Steve Jobs resigns (michaelpancho.wordpress.com)
Jobs on Life: 'Find What You Love' (online.wsj.com)
Posted: 01 Sep 2011 06:33 AM PDT
Former MCA president Ong Tee Keat today confirmed telling US diplomats that ethnic Chinese in the country were marginalised but reiterated that he was merely conveying the sentiments of the minority community.
Tee Keat said, "It is worth reiterating that the comments purportedly made by me was largely my observation and assessment of the Chinese community's sentiment and perception pursuant to the statement of marginalisation by (Minister Mentor) Lee Kuan Yew of Singapore."
At the sidelines ofaWorld Bank-International Monetary Fund meeting in Singapore in September 2006, Lee (left) told journalists that ethnic Chinese in both Malaysia and Indonesia were marginalised -aprovocative statement that resonated withasignificant segment of the Chinese populace across the causeway.
Lee was quoted as saying, "Our neighbours both have problems with their Chinese. They are successful. They are hardworking and, therefore, they are systematically marginalised."
'Leftovers', 'crumbs' are metaphoric descriptions
Inastatement to Malaysiakini today, Ong denied that his description of "leftovers" and "crumbs" referred to government projects, explaining that they were something that was expressed by the Chinese business community. Ong said, "The metaphoric descriptions of 'leftovers' and 'crumbs' were the exact words I quoted from certain corporate personalities that were coincidentally shared by the petty traders in my own constituency over the issue in September 2006."
His comments come after Malaysiakini reportedaconfidential cable that quoted Ong as saying that "there was onceaday in Malaysia when MCA would get the leftovers, but now we are just hoping to get some crumbs from the Umno table".
Kudos to Tee Keat for telling it as it is.
Slowly but surely, Chinese is being marginalised, like how one of the Chinatown traders put it, saying:
"We feel that parts of Chinatown will be taken away from us in stages. They've done it at UDA (Ocean) here, they're going to do it here, they're going to move further up."
Pejuang sebenar cuba dipadamkan dari sejarah
"Bukan rakyat tidak patriotik, tetapi rakyat mual dengan Umno.
"Inilah yang terjadi apabila negara menyambut kemerdekaan, seolah-olah negara merdeka hasil perjuangan Umno sahaja," katanya dalam satu kenyataan media.
Menurut beliau, nama-nama tokoh pejuang kemerdekaan negara seperti Dr Burhanudin al-Helmi, Ibrahim Yaakob, Abu Bakar al Baqir, Ahmad Boestamam dan lain-lain lagi seolah-olah cuba dipadamkan dari sejarah.
"Kenapakah nama-nama mereka digelapkan daripada sejarah negara ini?" soalnya.
"Ini membuktikan Umno ialah anak emas penjajah," ujarnya lagi. -mk
Kefahaman bahawa hanya Umno memperjuangkan kemerdekaan negara seperti dicanang pihak tertentu untuk mendapat sokongan orang Melayu sama sekali tidak benar, kata Dr Dzulkefly Ahmad.
Ibrahim Yaacob, Ahmad Boestamam dan Dr. Burhanuddin Al-Helmy
"Pada saya, sebenarnya perlu kepada penziarahan semula sejarah kemerdekaan kita kerana sejarah yang ada pada hari ini hanya ditulis dari satu sisi pandang iaitu dari pihak Umno BN yang diberi kuasa oleh penjajah British.
"Kita menerima nasionalis berunding meja bulat dengan British kemudiannya diberi kuasa, namun kita juga perlu mengiktiraf dan merakamkan perjuangan agamawan nasionalis dan golongan kiri yang turut berjuang memerdekakan negara dari British," katanya.
Mohamad dalam satu sidang akhbarnya di Perlis kemudiannya menafikan perkara itu dan mendakwa kenyataannya telah diputarbelitkan dan mendapati apa yang dilaporkan oleh akhbar Umno, Utusan Malaysia berkaitan dengan tragedi Bukit Kepong adalah fitnah terhadap beliau dan PAS. -HD
Terus bongkar dan dedahkan kebenaran. Sepertimana GB telah utarakan sebelum ini di SINI. Petikan:
Teruskan buat kecoh mengenai isu video Mat Sabu. Kerana dengannya semakin ramai yang akan mengkaji sejarah dan akan semakin terdedah tembelang dan pekong bahawa UMNO itu sebenarnya talibarut penjajah dan ini akan merupakan satu titik-tolak baru untuk keruntuhan UMNO sebagai pemerintah negara ini.
Posted: 01 Sep 2011 03:59 AM PDT
(Tech Support | Chicago, IL, USA)
Me: "[Company] tech support, how may I help you?"
Caller: "Hi, I've gotaproblem. Your program is telling me to getapet snake. I don't want one."
Caller: "It's giving meamessage telling me I needasnake to run it."
Me: "Read the message to me please."
Caller: "Error: Python required to run script."
Posted: 01 Sep 2011 03:32 AM PDT
Allahyarham Hassan: Kerajaan boleh jatuh jika enggan dengar 'suara' ilmuan
Dilihat temu bual terakhir dengan media, bekas ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Allahyarham Datuk Dr Hassan Ahmad berkata, protes atau gerakan diketuai oleh golongan ilmuan akan berterusan dan mendatangkan kesan buruk jika kerajaan mengambil pendirian tidak mahu mendengar langsung suara mereka.
Terbaru, sindrom penafian dan penolakan TPM, Muhyiddin Mohd Yassin dan Rais Yatim terhadap kajian ilmiah oleh Merdeka Center adalah petanda kejatuhan awal UMNO BN.
Ia sekaligus membenarkan telahan Allahyarham Hassan Ahmad dimana sikap para menteri yang egoist itu bakal menumbangkan kerajaan UMNO BN sendiri - jangan dipersalahkan dan jangan berdolak-dalik terhadap kebenaran itu.
Terus hentam malah tangkap para ilmuan jika kamu mau, lebih cepat UMNO BN terhempas dan bersepai ke bumi.
Posted: 01 Sep 2011 02:21 AM PDT
Source from Renaissance:နိုင်ငံကို တကယ်မချစ်လို့ စွန့်ရစ်လေရော့သလား by padonmar (ပဒုမ္မာ့ကိုယ်တွေ့)
အစိုးရသစ်ရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့က ဦးဝင်စတန်ဆက်အောင် ပြောလိုက်တဲ့ ပညာတတ်များ ပြန်လည်ခေါ်ယူရေးဆိုတာလေး ကြားပြီးကတည်းက ကျမ ရင်ထဲမှာ ပြောချင်တာ လေးတွေ ပလုံစီနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကလည်း စာချောအောင် မရေးတတ်၊ ကွန်ပျူတာကလည်း ဝလုံးတန်းဆိုတော့ စာရိုက်ရမှာ ကြောက်တာတွေပေါင်းပြီး လက်တွန့်နေမိပါတယ်။
၅-၈-၂၀၁၁ ကြေးမုံသတင်းစာမှာပါတဲ့ မောင်တင်အေး (သရက်) ရဲ့ နိုင်ငံကိုစွန့်ခွာခြင်း ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရတော့ ပြော ချင်စိတ်တွေ တားမရတော့ပါဘူး။ တတ်သလောက် မှတ်သလောက်နဲ့ဒီ Post လေးတင်ပြီး ရင်ဖွင့်ချင်ပါတယ်။ အပြော မတတ်လို့ ဆဲသလိုဖြစ်ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ ကျမဟာ နိုင်ငံကိုစွန့်ခွါသူထဲမှာ မပါကြောင်းပါ။ အခုထိ ကျမ မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်ကိုမှလည်း ပြောင်းရွှေ့ဘို့ခြေလှမ်း နေခြင်းမရှိပါ။ ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုး သားချင်းတွေထဲမှာတော့ နိုင်ငံကို စွန့်ခွာသူတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ ဘယ်တော့မှ သူတို့ကိုအပြစ် မမြင်၊ အပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့တွေ နိုင်ငံကိုမချစ်လို့ စွန့်ခွါသွားကြတယ်လို့လည်း ဘယ်တုံးကမှ မထင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျမ တို့ ဒီတိုင်းပြည်ကို ချစ်သလောက် သူတို့လည်း ချစ်ကြမှာပါ။ မေးကြည့်လိုက်ပါ။ အကယ်၍ သူတို့လက်ရှိနေတဲ့ တိုင်း ပြည်နဲ့ မြန်မာပြည် အားကစားပွဲတခုမှာ ထိပ်တိုက်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကိုနိုင် စေချင်သလဲလို့။ သူတို့ မြန်မာလို့ဘဲဖြေကြမှာ ပါ။ ဒါဆိုသူတို့ဘာလို့နိုင်ငံကို စွန့်ခွါသွားကြသလဲလို့မေးရင် ကျမ အမြင်မှာတော့ သူတို့ကို နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ရှိသူများ က တန်ဖိုးမထားခဲ့လို့နဲ့ သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့နောင်ရေးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးချင်လို့ ဆို တဲ့အဖြေနှစ်ခု ကျမ တွေ့ပါတယ်။
သူတို့ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ရှိသူများက တန်ဖိုးမထားလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကျမကိုယ်တွေ့တွေနဲ့ ရှင်းပြပါမယ်။ ကျမတို့ ဘွဲ့ရတဲ့ခေတ်က အစိုးရဝန်ထမ်း အလုပ်ရဘို့ အလွန်ခက်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့် ရေး စာမေးပွဲကို ရေးဖြေ၊ နှုတ်ဖြေ စစ်ဆေးပြီး အောင်မှ သတ်မှတ်ဦးရေဘဲ ခန့်ထားတဲ့စနစ်ပါ။ ဆရာဝန်တွေ အတွက်တော့ ဝန်ထမ်းလုပ်သက် ၂ နှစ်ရှိမှ ဘွဲ့လွန်ဖြေခွင့်ပေးတဲ့ ခေတ်ပါ။
ကျမဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်ရဲ့ "သူ" ၊ဒေါက်တာထွန်းရွှေရဲ့ "သက်ဝေမေကျော့"၊ ဒေါက် တာမောင်သင် ရဲ့"ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုတိုများ" နဲ့ ကြီးခဲ့ရတော့ အဲဒီဝတ္ထုတွေထဲကလို စေတနာဆရာဝန် ဖြစ်ချုင်ခဲ့သူပါ။ ငယ်ငယ်က ရွှေသွေးထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကယားပြည်နယ်က ဆရာဝန်မလေး သူလက်ထပ်တဲ့နေ့မှာ ဧည့်ခံပွဲကျင်းပနေရင်း ထားခဲ့ပြီး မီးမဖွားနိုင်တဲ့ လူနာကို ဆေးသွားကုပေးလို့ ယောက္ခမလောင်းက မင်္ဂလာပွဲဖျက်ပစ်တာတွေ၊ သူသေတော့ ဆေးခန်းက "အထက်သို့"ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်လေးကို ကယားလူမျိုးတွေက အုတ်ဂူလေးမှာ တပ်ပေးတာတွေ ဖတ်ရင်း မျက်ရည်ကျမတတ် အားကျမိခဲ့ရသူပါ။ ပြောရရင်တော့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဆရာဝန်လုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သူ လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ကျမတို့ ရှေ့အတန်းက အကိုအမတွေ အောင်ပြီးသော်လည်း ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးက စာမေးပွဲမကျင်းပပေးလို့ ဆမ လက်မှတ်ကိုင်ပြီးစောင့်နေကြတာ ၄-၅ နှစ်ထက် မနည်းတော့ပါဘူး။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျမတို့ အောင်တဲ့နှစ်မှာ (ကျမတို့ အတန်းက လူကြီးသားသမီးတွေများတယ်) စာမေးပွဲခေါ်ပြီဆိုတော့ အရမ်းပျော်ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ဗဟု သုတ စာမေးပွဲ နှစ်ဘာသာအတွက်လည်း လေ့လာရပါတယ်။ ကျူရှင်က နယ်မှာနေတာလည်းဖြစ်၊ တသက်လုံး ကျူရှင် မတက်ခဲ့ဘူးတော့ ဒါအတွက်နဲ့တော့ မတက်တော့ပါဘူး။ နေ့စဉ် ဖတ်နေကျ သတင်းစာတွေလည်း ညက်ညက်ကျေ အောင်ဖတ်မှတ်တာပေါ့။ ရေးဖြေကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ အောင်ပါတယ်။ နှုတ်ဖြေအတွက် အများပြောသလို မြန် မာဆန်ဆန်လေးဝတ်၊ ရိုရိုကျိုးကျိုးလေးနဲ့ Interview ခန်းထဲဝင်၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးက လူကြီးတွေ ၅ ယောက် ဝိုင်း ပြီးမေးကြသမျှ ကျမ အထင် ၈၀ – ၉၀ % လောက် ကျမ ဖြေနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နာရီဝက်လောက်ကြာအောင် မေးပြီး တဲ့အခါ တယောက်က သမီးအသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတဲ့။ ကျမက ၂၄ နှစ်လို့ဖြေပါတယ်။ အဲဒီတော့ အော် ငယ်ပါသေးတယ်တဲ့။ ကျမသိလိုက်ပါပြီ။ ကျမကို မရွေးတော့ဘူးလို့။ ပြောဘို့မေ့ ကျန်သွားတယ် ကျောင်းမှာလည်း ကျမ က အမှတ်တွေသိပ်မဆိုးတဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။
အရည်အချင်း ကိုမရွေးဘဲ ငယ်သေးလို့မခေါ်ချင်ရင်လည်း အစကတည်းက အသက်ကို မြှင့်ပြီးကန့်သတ်ပါလား။ ပြန် အထွက်မှာ အသိတယောက်နဲ့တိုးတော့ စောစောကမှကြိုမပြောဘဲ။ Plaster ရှာပေးလို့ရတယ်တဲ့လေ။ ကျမ အရည်အ ချင်းမရှိဘဲ Plaster နဲ့မှ ရမယ့်အလုပ်ကို ကျမလည်း မလိုချင်တော့ပါဘူး။ နောက်နှစ်တွေမှာ စာမေးပွဲခေါ်တော့ စာ တောင် မဖတ်တော့ဘဲ သွားဖြေပါတယ်။ ရေးဖြေကတော့ အောင်တာပါဘဲ။ နှုတ်ဖြေကတော့ စိတ်နာလို့ သွားကိုမဖြေ တော့ပါဘူး။ ပြောချင်တာကတော့ တကယ် တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ပေးမယ့် ဝန်ထမ်းကောင်းတယောက်ကို သူတို့လွှင့် ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
နောက် အဖြစ်အပျက်တခုကတော့ ကျမ သူငယ်ချင်းပါ။ သူကစာသိပ်တော်ပါတယ်။ လူရည်ချွန် ခြောက်ထပ်ကွမ်းပါ။ ကျောင်းမှာ Roll No: (2) ပါ။ စာမေးပွဲတိုင်း ဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်သူပါ။ ဘွဲ့ရပြီးတော့ ဆေးသုတေသနက အလုပ်ခေါ်တာ သူသွားလျှောက်ပါတယ်။ သူ့မိဘတွေရဲ့ လုပ်ငန်းမေးပြီး၊ အဲဒီအလုပ်ဘဲ ပြန်လုပ်ပါလားလို့ ပြောခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီက တည်းက သူပြည်ပထွက်သွားတာ အခု အထူးကုကြီးအဖြစ် ပြည်ပမှာ အခြေချနေပါပြီ။ တော်တဲ့သူက ဘယ်ရောက် ရောက် စင်တော်က ကောက်သွားမှာပါ။ တိုင်းပြည်ကတော့ နစ်နာခဲ့ပါပြီ။ 88 အရေးအခင်းအပြီးမှာ ပြည်ပထွက်ဖို့လည်း လွယ်သွားတော့ ကျမတို့ အတန်းက ဝန်ထမ်းအလုပ်မရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော၊ ဆရာတွေ၊ နောင်တော်အမတော်တွေ ရော နိုင်ငံအသီးသီးကို ထွက်ကြပါတယ်။
သူတို့ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ တိုင်းတပါးမှာ အခြေချနိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဓါတ်ဆီဆိုင်ဝန်ထမ်း၊ အိုက်တိုး ပဂေးဆံ၊ Waiter ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းအကူ စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ပညာအရည်အချင်းထက်န်ိမ့်ကျတဲ့ အလုပ်တွေ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ပြီး ဝင်ငွေ ရှာ၊ တဖက်ကလည်း ကျောင်းတက်ကြရပါတယ်။ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ မူလအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတိုင်း ရတဲ့သူ အနည်းအကျဉ်း ရှိနိုင်ပေမယ့် အများစုကတော့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားပြီးမှ ဆရာဝန်အဖြစ်နဲ့ပဲ အသက်မွေးနိုင်တဲ့သူလည်းရှိ၊ တချို့ကတော့ လိုင်းပြောင်းပြီး Sushi ဆိုင်ဖွင့်တာမျိုး၊ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုင်းကို ပြောင်းလိုက်ကြတဲ့သူ တွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒီလိုဆို အစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်မရလည်း G.P လုပ်ပြီး အဆင်ပြေနေတဲ့ သူတွေအများကြီးပါ၊ ပြည်ပထွက်စရာ မလိုပါဘူး လို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ကျမအတွေ့အကြုံပဲပြောပါမယ်။ ကျမ က နယ်မြို့ လေးမှာ G.P ငါးနှစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မိဘပိုင် အိမ်မှာ မိဘကရင်းပေးတဲ့ ငွေငါးသောင်းနဲ့ ဆေးခန်းပရိဘောဂတွေလုပ်၊ ဆေးတွေဝယ်ပြီးတော့ ဆေးခန်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က တရုပ်ကလာတဲ့ ထိုးဆေး စားဆေး တွေက B.P.I ထက် ဈေးသက်သာပြီး Effective လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုးဆေးတလုံးကို တကျပ် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပါရာစီတမော တလုံးကို ၁၀ ပြား၊ Ampicillin တလုံးကို တမတ်လောက်ကျတဲ့ ခေတ်ပါ။ အဲဒီအချိန်က အသားဆေးတလုံးထိုးပေးပြီး တရက်စာဆေးပေးရင် (ကျမက ဆေးကို စာအုပ်ထဲကအတိုင်း Dose အပြည့်ပဲပေးပါတယ်) ဆေးဖိုး သုံးကျပ်လောက်ကျပါတယ်။ ကျမ လူနာဆီက ငါးကျပ်ယူတယ်။ တောကလူနာ ဆိုရင် သူထပ်မလာနိုင်မှာစိုးလို့ Antibiotics ကို ငါးရက်စာ တခါတည်း ပေးလိုက်ရတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့လူနာဆိုရင် ဆေးဖိုး မယူတဲ့အပြင် ဝမ်းလျှောနေရင် ဓာတ်ဆား ရည်ပါဖျော်တိုက်လိုက်ရတယ်။ အာဟာရမပြည့်တဲ့ ကလေးတွေဆိုရင် မုန့်ပါ ဝယ်ပေးလိုက်ရတယ်။ တခါသုံးဆေးထိုးအပ်တွေမပေါ်သေးတော့ Syringe နဲ့ Needle တွေကို အနည်းဆုံး မိနစ် ၂၀ ကြာ အောင် ပြုတ်ပြီးမှ ဆေးထိုးတယ်။
မီးမလာတဲ့နေ့တွေမှာ ကျမရဲ့လူနာတွေဟာ မီးသွေးမီးဖိုလေးကို ကူပြီး မီးမွှေးပေးကြရတယ်။ လူနာရှင်းသွားပြီးချိန် Syringe နဲ့ Needle ပြုတ်တဲ့အိုးလေး မေ့ထားမိလို့ တူးခြစ်ပြီး လွှင့်ပစ်ရပေါင်းလည်း မနည်းဘူး။ အဲဒီလို မိဘလုပ်စာ ထိုင်စား၊ မိဘဆင်တဲ့ အဝတ် ဝတ်ပြီး ၅ နှစ်လောက် ဆေးခန်းဖွင့်လိုက်တာ ကျမလက်ထဲ ဆေးခန်းထဲက ဆေးတွေနဲ့ ငွေ ငါးသောင်းဘဲ စုမိတယ်။ ကျမ မိဘကလည်း ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ တင်ကျွေးထားလို့ပေါ့။ အဲဒီအချိန် ကျမအဖေ ကလည်း အသက်ကြီး ကူဖော်လောင်ဖက်လည်းမရှိတော့ အဖေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ကျမတာဝန်ယူ လိုက်ရတယ်။ ကျမရဲ့ဆေး ခန်းလေးပိတ်လိုက်ချိန်မှာ လူနာတွေလာမေးရင် ဆေးခန်းနဲ့တွဲလျက် ပွဲရုံ စားပွဲနောက်မှာ ကျမပုန်းနေရတယ်။ မျက်နှာ ပူလို့။ ခုထိလည်း ကျွန်ရဲ့တောကလူနာတွေ ကျမကိုတွေ့ရင် ဝမ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်ကြတုန်းပဲ။ ကျမကတော့ ဒီ Profession မှာ ကျမဆက်လက် မရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာကို ခုထိ လိပ်ပြာမလုံနိုင်သေးပါဘူး။
G.P နဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ဆရာဝန်တွေ အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့ ထောက်ပံ့ ကူညီမှုမပါရင် စေတနာ ဆရာဝန်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့စေတနာတွေ ပြည်သူအပေါ် ပိုပြီးထင်ဟပ်နိုင်မှာပါ။
အခုပြည်ပရောက်နေတဲ့ ဆရာတယောက်အကြောင်းလည်းပြော ပြချင်ပါသေးတယ်။ 88 မတိုင်မီက အဖြစ်ပါ။ M.Sc အောင်ပြီး M.R.C.P ဝင်ခွင့်ကို အကြိမ်ကြိမ်ဖြေပါ တယ်။ တနှစ်ပြီးတနှစ် နောက်ဆုံးဆန်ကာတင်မှာ သူကျန်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတနှစ် Viva ဖြေပြီး တော့ ဆရာမကြီး ကိုယ်တိုင်က မောင်…ရယ် ဒီနှစ်မင်းပါမှာ သေချာပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါလည်း သူပြုတ် ကျန်ခဲ့တာပါဘဲ။ ဆရာကစာတော်ပေမယ့် ကျောထောက်နောက်ခံမှ မကောင်းခဲ့တာကိုး။ အဲဒီတော့ ထွက်ခွင့်ရတဲ့ အချိန်မှာ ဆရာထွက်သွားပါတယ်။ ဆုံးရှုံးမှုတခု ပါပဲ။
မကြာသေးခင်က House Surgeon လေးတွေ လစာ ၁၂၀၀ ကျပ်ကနေ ၅၅၀၀၀ ကျပ် ကို တိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ မုဒိ တာပွားရပါတယ်။ အခုအပြင်မှာ စာမတတ်တဲ့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းက တနေ့ ၁၅၀၀ ကျပ် ရပါတယ်။ ၈ တန်းလောက်တတ် တဲ့ အထည်ချုပ်သမလေးတွေ(ချည်မွှေးညှပ်လေးတွေ) အောက်ထစ် တလကို ၅၀၀၀၀ ကျပ် ရပါတယ်။ House Surgeon ဘဝ သိပ်ပင်ပန်းပါတယ်။ မိဘလုပ်စာ စားနေလို့သာ ဒီလိုလုပ်နေနိုင်ကြတာပါ။
ဒီလိုဆိုရင် ဘွဲ့လွန်တွေရပြီးမှ ထွက်သွားတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုကြောင့်လဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်။ ကျမသူငယ်ချင်း M.R.C.P ယူပြီး ပြန်လာခါစမှာ Ward တိုင်းမှာ Defibrillator ခေါ်တဲ့ နှလုံးနှိုးစက် ထားပေးသင့်တဲ့အကြောင်း ( နိုင်ငံခြားမှာ ဆရာ ဝန်မဟုတ်တဲ့ သူတောင်တတ်ရပါတယ်) အကြံပေးတော့ သူအဆူခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းတော့ သူလည်း ဆင် ဆင်ခြင်ခြင်အလိုက်သင့် နေသွားရပါတယ်။
M.Sc အောင်ထားတဲ့ အမတယောက်ကတော့ သူ့အမျိုးသားကလဲ ဝန်ထမ်းပါ၊ကလေးတွေ ငယ်စဉ်မှာတော့ အမနဲ့က လေးတွေက တမြို့၊ သူ့အမျိုးသားကတမြို့နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သမီးလေးတွေ ကိုးတန်း ဆယ်တန်းမှာ ကျောင်းကောင်းတဲ့ မြို့ကြီးမှာလည်းထားချင်ရှာ တာပေါ့။ အဲဒီအချိန် ဒီဆရာဝန်မကို ပိုသေးတဲ့မြို့လေးကို Transfer ထွက်လာပါတယ်။ သူလည်း စေလွှတ်ရာသွားရင်း သူ့အမျိုးသားတာဝန်ကျရာ တိုင်းမြို့ကြီးတမြို့(ရန်ကုန်၊မန္တ လေး မဟုတ်ဘူးနော်) ကို ရွှေ့ပေးဘို့ အသနားခံတာ၊ စာသင်နှစ် နှစ်ဝက်သာကျိုးသွားရော ပြောင်းမပေးပါဘူး။ ဒါနဲ့သူ လည်း ကလေးတွေ ရှေ့ရေးအတွက် Absconded အလုပ်က ထွက်ပြေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ အဲဒီအတွက် ပြစ်ဒဏ်က (၁၅ နှစ်လောက်နိုင်ငံ့တာဝန်ထမ်းခဲ့သူပါ) ဆမ ၅ နှစ် ပိတ်ခံရပါတယ်။ ဆမ မရှိတဲ့ ဆရာဝန်ဟာ စိတ်ထဲ မလုံခြုံပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းလည်း မဖွင့်ရဲ၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာလည်း ကိုယ့်နာမည်နဲ့ မလုပ်ရဲပါဘူး။
အဲဒီလိုဘဲ သားသမီးရှေ့ရေးကိုကြည့်ပြီး ဒီနိုင်ငံကို စွန့်ခွါရတဲ့သူတွေ အများကြီးပါပဲ။
နယ်မှာနေတုံးက ကျမတူလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ မောင်မောင်ဆိုတဲ့ ကလေးလေးဟာ သူ့အဖေက သွားဆရာဝန်၊ အမေက ဆရာဝန်ပါ။ ဆိုလိုတာက Gene ကိုက ဥာဏ်ရည်မြင့်ပါတယ်။ အဲဒီကလေးဟာ သိပ်တော်ပါ တယ်။ genius ကလေးပါပဲ။ သူငယ်တန်းတောင်မတက်ရသေးခင် ကာတွန်းတွေကို သွက်သွက်ကြီးဖတ်နိုင်နေပါပြီ။ နောက်တယောက်က အောင်အောင် ဆိုပါတော့။ သူ့မိဘက ဆယ်တန်းတောင်မအောင်တဲ့ ကုန်သည်တွေပါ။ ချမ်းသာပါ တယ်။ သူ့ဥာဏ်ရည်က သာမာန် ပါဘဲ။ သူငယ်တန်းကနေ စတုတ္ထတန်းထိ စာမေးပွဲတိုင်းမှာ မောင်မောင်က အမြဲ ပထမ ပါ။ အောင်အောင်က အဆင့် ၅ လောက်မှာရှိပါတယ်။ မူလတန်းကျောင်းကနေ အထက်တန်းကျောင်းပြောင်းပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှာ မေးလိုက်ရင် အောင်အောင်က ပထမ အမြဲရသွားတယ်။ မောင်မောင်လေး က အဆင့် ၃ လောက်ရောက် သွားတယ်။ ကလေးက အဲဒီအတွက် မျက်နှာမကောင်းရှာပါဘူး။ သေချာမေးကြည့်တော့မှ အောင်အောင့် အမေက အောင်အောင့် ကို အတန်းပိုင်ဆရာမအိမ်မှာ ညအိပ်ကျူရှင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖိဖိစီးစီး သင်ပေးလို့တော်လာတယ် လို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် မောင်မောင်လေး ခမျာမှာ သူဖြေတာတွေ ဘယ်လိုမှန်မှန် ရသင့်တဲ့အမှတ်မရလို့ စိတ်ဓာတ်တွေကျ လာပါတယ်။ အဲဒါကို သူ့မိဘတွေ မခံစားနိုင်ကြပါဘူး။ အဲဒီအချိန် သူ့အဖေရဲ့ မိတ်ဆွေက ပြည်ပက သွားဆေးခန်းမှာ အကူလိုတယ်ဆိုတော့ အဲဒီသွားဆရာဝန်ဟာ ဆေးခန်းအကူအဖြစ်နဲ့ ထွက်သွားပါတော့တယ်။ မကြာခင် ဆရာဝန်မနဲ့ သူ့ကလေးတွေပါ လိုက်သွားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျမတို့တိုင်းပြည်ဟာ သွားဆရာဝန် တယောက်၊ ဆရာဝန်တယောက် သာမက အနာဂတ်ရဲ့လူတော်လေးတွေပါ ဆုံးရှုံးသွားရပါတယ်။
ဒီလို သားသမီးရှေ့ရေး ဦးစားပေးပြီး ထွက်သွားကြပေမယ့် သူတို့တွေ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သိပ်ပျော်နေကြတယ်လို့ မစွပ်စွဲ လိုက်ကြပါနဲ့။ မကြာသေးခင်က ကျမသူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အဖေဆုံးသွားတယ်။ သူငယ်ချင်းကပြည်ပမှာ။ သူ့အဖေ ပြည်တွင်းမှာ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန် ပြန်လာလို့လည်း မရတော့ စိတ်ထဲမှာ မချင့်မရဲခံစားနေရရှာပါတယ်။ မိဘအ ပေါ် တာဝန်မကြေဘူးလို့ ဝမ်းနည်းနေရှာတယ်။ ကျမတို့ ဘယ်လိုဖျောင့်ဖျပေမယ့် တသက်လုံး ဒီအတွက်ကို Guilty အပြစ်ရှိသလို ခံစားသွားရရှာပါတော့မယ်။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်မိဘ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေချင် ကြမှာပါ။ ကိုယ့်ရေမြေမှာ ကိုယ့်စကားကို သွက်သွက်ပြောပြီး နေချင်ကြမှာပါ။ လူဆိုတာရေကြည်ရာ၊ မြက်နုရာ ရှာတတ် တာ ကမ္ဘာဦးအစထဲကပါ။ ကျမတို့ တိုင်းပြည်သာ ရေကြည်အောင်၊ မြက်နုအောင် မျှတတဲ့အခြေအနေတွေ ဖန်တီးပေးနိုင် ရင် ဒီလိုတိုိင်းပြည်ကို စွန့်ခွာရတဲ့အဖြစ်တွေ ဖြစ်လာမယ်မထင်ပါဘူး။
ကျမက ကျွမ်းကျင်ရာ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ ပြောရပေမယ့် ဒီလိုအဖြစ်တွေ အင်ဂျင်နီယာလောက၊ စီပွားရေးပညာရှင် လောက၊ ကွန်ပျူတာပညာရှင်လောက စသည်ဖြင့် အများကြီးပဲနေမှာပါ။
MRT,Sky Train,Subway ဆိုတာတွေ မရှိရင်နေပါစေ စစ်ကျန်Bus တွေ စီးနေရလည်း နေနိုင်ပါတယ်။
Charles & Keith မစီးရလည်း ကတ္တီပါ ပုံတော်ဖိနပ်နဲ့ ကျေနပ်ပါမယ်။
Chocolate နဲ့ Pistachio မစားရလည်း ဘိန်းမုန့်နဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းစားပြီး ဗိုက်ဝနိုင်ပါတယ်။
Ashworth ,Victoria Secret ဆိုတာတွေ မ၀တ်ရလည်း ယောလုံချည်၊ ကချင်လုံချည်၊ ရှမ်းအင်္ကျီလေးတွေ ၀တ်ပြီး လှတယ်လို့ ခံယူပါမယ်၊
ATM card,Credit card တွေမရှိလည်း ပိုက်ဆံ နွမ်းနွမ်းလေးတွေကို ဆာလာအိတ်တွေနဲ့ထမ်းပြီး အလုပ်လုပ်ပါမယ်။
Internet connection နှေးနေလည်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ဖတ်ပါမယ်။ ပေါက်ပြဲနေတဲ့ လမ်းတွေ ဖာမပေးရင်နေပါစေ ချိုင့်ခွက်တွေ ကြည့်ရှောင်ပါမယ်။
လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ကောင်းမွန်မျှတတဲ့ ပညာရေးစံနစ်၊ မိမိအရည်အချင်းလိုက်ခံစားခွင့် ဆိုတာ တွေရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ၊ ဒီမြေ ဒီရေ ဒီနိုင်ငံတော်ကို တတ်ခဲ့တဲ့ ပညာတွေနဲ့ အလုပ်အကျွေးပြုမယ့်သူတွေ ပေါများလာမှာပါ။
တရုတ်ပြည် တခါးဖွင့်ဝါဒ ကျင့်သုံးတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေတဲ့ Oversea Chinese တွေကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဖိတ် ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ နိုင်ငံခြားမှာရနေတဲ့ လစာ၊ အခွင့်အရေးတွေထက်မနည်း ရစေမယ်လို့ ဖိတ်လိုက်တာ တော်တော် များများ ပြန်လာကြပါတယ်။ ကျမသိသလောက် တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး အဏုမြူဗုံးထွင်တဲ့သူဟာ အမေရိကားက ပြန်လာတဲ့သူလို့ မှတ်ဘူးပါတယ်။
အခု ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာ မကြာခဏ ကြားနေရတဲ့ လူနာနဲ့ ဆရာဝန်ကြား ပြဿနာတွေဟာ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန် မလုံ လောက်မှု ကနေစပြီးဖြစ်လာတာပါ။ အထူးကုဦးရေနဲ့ လူနာဦးရေဟာ မမျှတ တော့ပါဘူး။ လူနာတွေကလည်း ကိုယ့်ဝေ ဒနာကို အတော်ဆုံး၊ နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့မှ ရွေးပြချင်တာ အပြစ်ဆိုလို့မရပါဘူး။ ဆရာဝန်ကြီးတွေခမျာ မနက်ရုံးချိန်မှာ ဆေးရုံတာဝန်ထမ်းရတယ်။ ညနေ ဆေးရုံကပြန်တော့ တန်းစီနေတဲ့ ဆေးခန်းက လူနာတွေကို ကြည့်ရတယ်။ ပြီးရင် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ အတွင်းလူနာတွေကို ကြည့်ရတယ်။ တခါတလေ လူနာကြည့်ချိန်ဟာ ညသန်းခေါင်ဖြစ်လို့ လူနာရော လူနာရှင်ပါ အိပ်မောကျနေတာကို နှိုးပြီးကြည့်ရတာမျိုးလည်း ကြားနေကျပါ။ ဆရာဝန်ကြီးမှာလည်း လူနာကြည့်ရင်း ပင်ပန်းလွန်းလို့ ပြောတာတွေ နားထဲမဝင်ဘဲ ငိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်း ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုအခါမှာ အမှားအယွင်း တွေဆိုတာ ပေါ်လာတော့တာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ဆရာဝန် လူနာ အချိုးမမျှတရလဲ။ ကျမတို့ တိုင်းပြည်က လူတော် တွေကို ကျမတို့ ပြည်သူပြည်သားတွေ ဘာကြောင့် အသုံးချခွင့်မရတာလဲ။ ဆရာဝန်တွေကလည်း ပြည်ပထွက်အလုပ် လုပ်တယ်။ လူနာတွေကလည်း ပြည်ပထွက် ဆေးကုခံတယ်။ မြန်မာဆရာဝန်ကို ပြည်ပကတောင် လက်ခံ အသုံးပြု သေးတာ ပြည်တွင်းက ဘာလို့ မသုံးချင်ရမှာလဲ။ တောလက်ကျေးရွာတွေမှာလည်း လိုအပ်နေဆဲ၊ မြို့ကြီး ပြကြီးတွေမှာ လည်း လိုအပ်နေဆဲပါ။ အသစ်အသစ်တွေ မွေးထုတ်တာထက် ကျွမ်းကျင်ပြီးသူများ ပြန်လာရင် ပိုမကောင်းပေဘူးလား။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် လူမျိုးလူတန်းစားမရွေးကိုစောင့်ရှောက် လွှမ်းခြုံမှုပြုနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စနစ်ကြီးတခုကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖေါ်ဘို့ လိုနေပါပြီ။
ဒီအတွက် နိုင်ငံတကာမှာ Healthcare System management ပါရဂူဘွဲ့ရသူတွေ ကမြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်အကျိုးပြုကြဘို့ ဆန္ဒတွေ အလျံပယ်ရှိနေကြောင်းလည်း ကြားနေရပါတယ်။
ကျမအမြင်မှာတော့ နိုင်ငံကို စွန့်ခွါသူတွေဟာ Salmon ငါးတွေနဲ့ တူပါတယ်။ Salmon ငါးတွေဟာ ပင်လယ်ထဲက ရေငန် ငါးတွေပါ။ သူတို့ဓလေ့က မြစ်ညာထိ ဆန်တက်ပြီး ဥချကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ အကောင်ပေါက်မှ ပင်လယ်ကို ပြန်စုန်ဆင်း လာကြပါတယ်။
ကျမတို့ ဆရာတွေ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေလည်း ရေမြေရာသီဥတု အဆင်ပြေမယ့် မြစ်ညာနဲ့တူတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားတွေကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှား ဆန်တက်သွားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ Salmon ငါးတွေ ကြင်ဖော်နဲ့တကွ သားသမီးတွေနဲ့ မိခင်ပင်လယ် ဆီ ပြန်လာတာကို ငါ့ကိုပစ်သွားရကောင်းလားလို့ အပြစ် တင်မစောနေကြပါနဲ့တော့။ သူ့ သဘာဝပါဘဲ။
ပြန်ချိန်သင့်လို့ ပြန်လာကြတဲ့သူတွေကို လမ်းကနေ အတားအဆီးပိုက်ကွန်တွေနဲ့လည်း မဖမ်းသင့်ပါဘူး။ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ လက်ကမ်းလို့ ကြိုသင့်ပါတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ကျမရဲ့ ပေါက်ကွဲသံစဉ်လေးကို သည်းခံဖတ်ရှုပေးတာကျေးဇူးပါ၊ တေးရေးတေးဆို ခင်ဝမ်းရဲ့သီချင်းတွေထဲက ကျမ နှစ်သက်မိတဲ့ ဆယ်လမွန်ငါးတို့အပြန် သီချင်းထဲကလိုဘဲ oversea burmese တွေ အမိမြန်မာပြည်ကို ပြန်လာပြီး ပြန် လည်တည်ထောင်ရေးမှာ တတပ်တအားပါဝင်နိုင်မယ့် အိပ်မက်လေးတွေ မက်ရင်း ဒီသီချင်းစာသားလေး လက်ဆောင် ပေးခဲ့ပါရစေ။
(မိုးဦးရေဆန် မိုးဦးရေဆန် ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန် …
ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန် … ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန် …
အပြန်အပြန် အပြန် ဆယ်လမွန်ငါးတို့ … အပြန် … )
အပြန်အပြန် အပြန် ဆယ်လမွန်ငါးတို့ …… အပြန် … )
BBC News hadareport entitled 'UK is accused of failing children' on the Unicef report 2007.
In light of the recent UK riots, the Unicef report has once again 'resurfaced' when its result was highlighted in an article written by Maria Hampton. The article is entitled 'Generation F*cked' at Adbusters.
Posted: 01 Sep 2011 12:47 AM PDT
Alternatively, you may click here to read Gundotra's full account, as written on his Google+ profile.
Posted: 01 Sep 2011 02:11 AM PDT
"Saya orang yang pemaaf, saya tidak pernah menyimpan dendam. Walaupun anak saya dibunuh dengan kejam dan tragik, saya maafkan beliau.
"Jauh dari sudut saya, saya tahu dia (pembunuh) tidak berniat mencederakan dan membunuh Ayu, kerana saya kenal beliau. Hampir setiap hari saya memberi beliau makan dan minum tidak kira pagi dan malam, apa yang dilakukannya (pembunuh) hanya sebab terdesak," katanya kepada Sinar Harian di rumahnya di sini, baru-baru ini.
Katanya, biarpun dalam dirinya tidak terpalit dendam, namun dia menganggap hukuman undang-undang yang akan dikenakan ke atas pembunuh Ayu sebagai pembalasan atas perbuatannya. -SH
Tiada Ayu, tiada persiapan
Biarpun sudah memaafkan pembunuh Ayu, Qomarodin berkata, beliau sekeluarga telah berpindah dari penempatan lama di Masai ke Skudai, kerana tidak mahu terus mengenang kisah sedih tersebut, apatah lagi isterinya Umidah Setu akan dicuit emosi setiap kali melintas pondok keselamatan di situ.
Qomarodin berkata, hikmah di sebalik kejadian itu, beliau telah membayar upah umrah dan haji untuk Ayu malah bersedekah hasil jualan tanah titik peluh pertolongan Ayu membantu beliau suami isteri berniaga kepada anak-anak yatim.
Biarpun telah lama memaafkan pembunuh Ayu, namun jauh di sudut hati Qomarodin, kerinduan terhadap anak gadisnya tidak dapat dibendung.
"Beliau anak kesayangan saya dan isteri kerana sifatnya yang mendengar kata dan berani juga ringan tulang.
"Saya yakin Ayu juga memaafkan pembunuh kerana beliau memiliki hati pemaaf seperti saya, malah setiap hari saya akan mendapat imbasan bayangan Ayu yang sentiasa tersenyum," katanya dengan nada sendu.
Sementara itu, sempena kedatangan Syawal ini, Qomarodin berkata, tiada persiapan atau sambutan yang besar akan dibuat, kerana selalunya Ayu yang gemar menguruskan hal berkaitan pakaian dan kuih-muih dan sebagainya.
Katanya, ketiadaan isterinya yang pulang ke Indonesia atas urusan keluarga juga, membuat beliau menyambut cara bersederhana, namun akan menziarah kubur Ayu di pagi raya dan hanya akan pulang ke Indonesia seminggu selepas perayaan.
Ayu minta RM70 pada hari terakhir
Menceritakan detik hitam itu, katanya, pada petang hari kejadian, Ayu pulang ke rumah meminta wang saku RM70 kerana Ayu tinggal bersama ibu angkatnya di Skudai.
Hari itu juga merupakan kali terakhir dia menamui Ayu.
Sementara itu, ibu saudara Ayu, Siti Qatimah Paimin, 51, yang telah 10 tahun tinggal bersama Ayu di sini, menganggap Ayu anak gadis yang ceria dan baik.
"Petang hari kejadian, saya ada nasihatkan dia (Ayu) agar tidak keluar malam, kerana khuatir akan keselamatannya, namun Ayu hanya mengangguk.
"Saya tidak sangka perkara yang sering saya takuti selama ini benar-benar jadi kenyataan, namun saya redha akan pemergiannya," katanya.
Beliau juga sependapat dengan bapa Ayu, jika kemarahan terus dipendamkan, Ayu tidak mungkin akan kembali, dan apa yang terjadi merupakan takdir buat anak buahnya.
Manakala, bagi ibu angkat Ayu sejak dua tahun lalu, Juliana Jumail, 35, kehilangan Ayu masih berbekas di hatinya.
"Jika diikutkan tahun ini Ayu rancang untuk ikut saya pulang ke kampung di Air Hitam, Batu Pahat malah Ayu pernah menyatakan hasratnya untuk memakai pakaian sedondon dengan kami sekeluarga, namun semua tidak kesampaian.
"Istilah maaf itu, memang kami maafkan cuma kami tetap mahukan pembalasan setimpal terhadap pembunuh Ayu atas perbuatan kejamnya," katanya.
Juliana berkata, kehadiran Syawal ini beliau teringat akan kuih kegemaran Ayu iaitu tat nenas dan kek.
Sila klik untuk baca sepenuhnya
Memang pahit untuk terima kenyataannya, namun buat seorang ayah yang pemaaf yang anaknya telah dibunuh kejam, GB doakan semuga Allah melimpahkan pahala yang berpanjangan lantaran sikap sabar, tabah dan pemaafnya.
Begitu juga kisah seorang yang amat memusuhi Islam dan banyak menyakiti hati kaum muslimin dan pernah menyakiti puteri Rasulullah S.a.w, Zainab r.a.
Kisah ini terjadi apabila unta yang dinaiki oleh Zainab r.a dalam perjalanan ke Madinah dipanah oleh Hubar sehingga menyebabkan unta itu jatuh lalu mati.
Diriwayatkan pada ketika itu, Zainab r.a pada sedang sarat mengandung. Dia terhumban dari atas unta menyebabkan kandungannya gugur. Namun setelah peristiwa pembukaan Mekah, Hubar menemui Rasulullah S.a.w untuk memohon maaf daripada baginda dan baginda memaafkannya. Hubar kemudiannya melafazkan syahadah dan menjadi penganut Islam.
Pemandu chief executive Datuk Seri Idris Jala said that Singapore's MRT operators, who rely heavily on fare box revenues, were considered an exception. — file pic
KUALA LUMPUR, Aug 26 — Putrajaya's powerful efficiency unit has admitted that the Najib administration needs to acquire and develop land along the Klang Valley Mass Rapid Transit (MRT) route as it cannot afford the multi-billion ringgit project otherwise.
Inaletter sighted by The Malaysian Insider, Performance Management and Delivery Unit (Pemandu) chief executive Datuk Seri Idris Jala told Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry Malaysia (ACCCIM) president Tan Sri William Cheng that the government was pursuinga"rail-and-property" model as it would not be able to recover the cost of the first line between Sungai Buloh and Kajang through fares alone.
"For the government to manage the project efficiently and sustainably, fare box revenue will not be sufficient to finance the high capex and opex for the MRT network," Idris said in the letter dated August 23, written in response to Cheng's queries about the acquisition of Jalan Sultan land.
"Increasing the fares is not an option as the government wants to act responsibly by providing the rakyat with an affordable means of transport. Instead, the government is adoptingaprudent approach towardsasustainable financial model for the MRT throughamodified rail-plus-property model."
The government has saidaMinistry of Finance unit called Dana Infra will raise funds for the MRT, which is the country's most expensive infrastructure project to date, but has yet to give any details of the funding apart from saying it will develop the land along the route.
The Minister in the Prime Minister's Department pointed out that Hong Kong's MTR Corporation, which has successfully applied the model to its Mass Transit Railway (MTR) network, would not have an "effective means of recouping the vast sums spent on developing the MRT" without revenue from property development as earnings from fares only made up 35 per cent of total revenue.
He stressed that Singapore's MRT operators, who rely heavily on fare box revenues with minimal contribution from commercial activities, were considered an exception rather than the norm.
Chinatown traders see the Jalan Sultan land acquisition asathreat to the historic enclave. — file pic
But Malaysia would be usingamodified version of the rail-and-property model with "some amount of land acquisition" as the Sungai Buloh-Kajang (SBK) line would traverse built-up areas unlike Hong Kong, which had access to several tracts of mainly reclaimed land that allowed for integrated station and property development, Idris said. "The government is thus not acquiring land banks for the MRT Co. nor abusing the Land Acquisition Act for this purpose," he assured, referring to the new project owner effective September 1.
However, Idris also revealed that land along the SBK corridor that will be developed by government-linked companies (GLCs), including the Rubber Research Institute (RRI) and Kuala Lumpur International Financial District (KLIFD) sites, would not go directly towards offsetting the capital expenditure for the MRT.
The minister added that he would let the Land Public Transport Commission (SPAD) respond to Cheng's concerns over the land acquisition on Jalan Sultan in Chinatown, which traders there see asathreat to the historic enclave.
"These involve technical details such as the design of the alignment, constructibility, the need for station integration and so forth and why land above ground is acquired (in respect to the National Land Code) even if the MRT tunnels are below for safety and security concerns," he said.
"On this score, perhaps we may also seeamore positive development from the proximity of the MRT line to Chinatown where opportunities for revitalisation and restoration of the area would benefit the Chinese community in this part of Kuala Lumpur."
Outgoing project owner Syarikat Prasarana Negara Bhd (Prasarana) has said it needs to acquire the land above the MRT tunnel that will run along Jalan Sultan and demolish existing buildings in the interest of public safety.
Both Prasarana and SPAD have also said the government has to acquire the land before any subsurface work can begin as Section 44 of the National Land Code 1965 states that property owners not only have the right to the plot itself but also the air above and the ground below.
But DAP publicity chief Tony Pua has accused the Najib administration of using the project as an excuse to hijack prime land in the capital for profit, pointing out that the National Land Code had been specifically amended in 1990 to allow for the acquisition of underground land without affecting surface property.
SPAD CEO Mohd Nur Ismal Kamal said this week that the regulator was currently working onasolution to allow traders to return to Chinatown lots being acquired for the construction of the MRT but said there was "no guarantee" that they would eventually be surrendered to the owners.
Posted: 31 Aug 2011 10:19 PM PDT
Today is my last day of the holidays. Though the office is officially closed tomorrow, I have to head in for some work as some of my clients are opened for business and I have some work for them that needs to be done ... siggghhh ...
I'm taking it easy today and am just planning to stay home and take things easy. I'm even forsaking my run to give my legsalittle rest. Hadaslight pain in the shin develop after yesterdays run and I'm not taking any chances with it. I've got quiteafew races coming up in the next couple of weeks and it's better to skip running foraday or two than to suffer from some serious injury down the line. Besides wifey said she'll break my legs if I even attempt to try running today ... LOL!
Sometimes its good to just stay in and do nothing. We've been gallivanting the malls the past two days and spent quiteabit, especially me, on some running gear so we decided to stay home today and resist the urge to go buy more running gear ... LOL! But even staying home, the time passes by pretty quick. It seemed like it was onlyafew minutes ago that I just woke up from sleep and now it's already almost 1pm!
I'm slightly jealous of the wife today cos she'll be running and I'll be sitting at home from my2day enforced rest ... siggghhh ... she's already warned me not to sneak up on her and has threatened me with bodily harm if I do so I guess I'll just be sitting at home moping around while waiting for her to get home from her run later. Maybe I'll go wash the kitchen or clean those assanti custom wheels or something, at least I'll burnacouple of calories and get some work out that way.
Posted: 31 Aug 2011 11:58 PM PDT
MRT project: Chinatown traders slam SPAD for broken promise
On August 24 2011,aday after 'hero' Soi Lek announced KL Chinatown traders could stay on, SPAD came out to say that land acquisitionamust.
Chinese had better wake up lah, especially the Chinese businessmen who only think about their livelihood. Now, they know that as long as the Umno-led government is around, the rakyat will be put last but the pockets of the rich Umnoputras will be put first!
Anyway, I think they are slowly but surely waking up or they have already woken up when one of the KL Chinatown traders said:
"They're worse than piranhas. Piranhas only eat the flesh, they leave the bones behind. These guys seem to want to take everything."
Melibatkan diri dalam politik dengan tujuan memerdekakan tahahair daripada penjajahan Inggeris. Beliau menjadi ahli sayap pemuda Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) yang dipimpin Dr Burhanuddin al-Helmy dan Ishak Haji Mohammad;Mat Indera juga aktif didalam pergerakkan yang dikenali sebagai Angkatan Pemuda Insaf (API).
"Cuma apa yang kerap diceritakannya ialah tindakan mereka ketika itu adalah disebabkan tekanan yang dihadapi akibat ugutan Inggeris. Mungkin ada melabelkannya sebagai petualang tetapi saya merasakan dia seorang pejuang tetapi memilih jalan yang salah.
"Tidak adil terus melabel Mat Indera sebagai pengkhianat kerana dia juga berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Cuma kumpulan yang disertainya itu tidak sesuai, itupun disebabkan tiada kumpulan lain ketika itu. Kumpulan Melayu lain terlalu lambat bertindak" katanya. -BH
Cuma sedikit perhatian untuk para membaca yang membaca kedua-dua tulisan di atas yang isinya hampir serupa.
Lagenda Mat Indera mungkin telah mengalami sedikit tokok-tambah seperti yang terpapar di dalam tulisan-tulisan di atas.
Ini kerana, jika Mat Indera seorang yang kuat berpegang kepada agama, seorang hafiz al-Quran, maka GB kira tentulah beliau mempunyai pegangan tauhid yang mantap. Justeru itu, penggunaan "tangkal" dirasakan kurang tepat untuk menggambarkan seseorang yang mempunai ilmu tauhid.
Mat Indera setelah diberi minum air kopi bercampur kecubung itu telah tidak sedarkan diri; maka pada ketika itulah Mat Tukyo mencabut segala tangkal. Di katakan tangan Mat Indera diikat dengan lalang dan kemudiannya dibawa ke Balai Polis Seri Medan. Adalah dipercayai kehilangan tangkal dan ikatan lalang menggugurkan semua kekuatan ilmu kebatinan beliau.
Bagi orang yang mempunyai Ilmu Tauhid, mereka tidak bergantung kepada sebarang tangkal dan azimat. Tangkal dan azimat adalah mumkin "benda baharu" dan Ilmu Tauhid mengajar kita setiap yang baharu tidak memberi bekas - samada mendatang menafaat atau mudharat, kerana yang mendatang menfaat dan mudharat hanyalah Allah s.w.t.
Yang masih percayakan tangkal, azimat, tahyul dan khurafat kebanyakannya hanyalah orang Melayu UMNO yang dipaparkan dengan beberapa adat jahiliyah yang diamalkan seperti menyembah tugu negara, tepung tawar, menggunakan manderam (ingat kes Pak Lah menemui manderam di meja pejabat PM beberapa minggu sebelum beliau mengisytiharkan peralihan kuasa kepada Mohd Najib?) dan beberapa kes pemimpin UMNO menemui bomoh untuk mendapatkan tangkal di dalam merebut dan mempertahankan jawatan di dalam parti (ingat kes Datuk Mazlan yang dikerat 18 oleh Mona Fendy?).
Menyatakan Mat Indera menggunakan tangkal adalah satu fakta yang meragukan untuk seorang yang kuat berpegang kepada agama.
Justeru itu berhati-hati tatkala membaca dan mempercayai sebarang perkara-perkara yang boleh merosakkan aqidah.